भाग्यमानी कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल ! – yuwa Awaj
काठमाडौँ : सामान्यतया पुँ’जी बजारले कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीलाई विश्वास गर्दैन । लगानीक\_र्ताहरू आम कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीहरू खुला बजार अर्थ’तन्त्रका वि’रोधी हुने र निजी क्षेत्रलाई हस्तbक्षेप गर्न खोज्ने प्रवृ’त्तिका हुने मान्यता राख्छन् र उनीहरूको
कार्यकालमा बजारले गति लिन नसक्ने ठान्छन् । नेपालको पुँजी बजारको इ’तिहासलाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । दस’वर्षे स’शस्त्र यु’द्ध गरेर संविधानसभाको पहिलो चु’नावबाट माओवादी सत्तामा आएपछि पुँ’जी बजार सशं’कित बन्यो । त्यही बेला अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेयर बजारलाई ‘जु’वाघर’ भनेपछि ठूलो हल’चल म’च्चियो ।
लगत्तै उनले ल्याएको बजेटमा सेयर बि’क्रीबाट प्राप्त हुने नाफामा लाग्ने करको दर दोब्ब’र बढाएर १० प्रतिशत बनाए ।
त्यतिबेला ११ सय २५ को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसू’चक दिनहुँजसो ओ’रालो लाग्ने क्रम सुरु भयो ।
यो घ’टनामा मात्र होइन, अन्य बेलामा पनि पुँ’जी बजारले कम्यु’निस्ट अर्थमन्त्री बनेका बेला सहज महसुस गर्दैन ।
वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्दा ने’प्सेले ग’णतन्त्र स्थापना भएयताकै न्यूनतम बिन्दु २ सय ९० लाई छोयो । भरतमोहन अधिकारीको पहिलो कार्यकालमा बजार सानो थियो । उनको दो’स्रो कार्यकालमा पनि बजार उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेन । सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महराका पालामा पनि पुँ’जी बजार घटबढ भइरह्यो ।
पछिल्लो समय विज्ञ भनेर चिनिएका पूर्व-अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि बजारले विश्वास गर्न सकेन । तर, यो सवालमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने भा’ग्यमानी ठ’हरिए ।
कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री भए पनि पौडेललाई पुँ’जी बजारले विश्वास गरिरहेको छ, त्यो पनि दो’स्रोपटक ।
केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा पुँ’जी बजार सूचक ने’प्सेले १८ सय ८१ अं’कको ऐतिहासिक बि’न्दु छोएकोे थियो । पौडेलपछि पनि धेरैजना अर्थमन्त्री भए । तर, पुँ’जी बजारले सबैलाई विश्वास गरेन । ने’प्से परिसू’चक घटबढ हुँदै ११ सय बि’न्दुसम्म ओ’र्लियो ।
लगानीकर्ताले पुँ’जी बजारलाई माथि उठाउन धेरै को’णबाट आवाज उठाए, रु’वाबासी गरे तर अर्थमन्त्रीहरूले सुनेनन् ।
दुई तिहाइको जनमतका साथ विज्ञ भनिएका खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पुँ’जी बजारले गति लिने विश्वास गरिए पनि उल्टो भयो ।
पुँ’जी बजारबारे बेलाबेलामा आउने खतिवडाका टिप्प’णीले बजारलाई घटाउने काम ग¥यो । अर्थमन्त्रीको दोस्रो का’र्यकालमा भने खतिवडाको धारणामा परिवर्तन देखाप९यो । निजी क्षेत्र र पुँ’जी बजारबारे उनले सकारात्मक मात्र भनाइ राखे । परि’णाम बजारमा सुधारका केही संकेत देखिए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
Prevबधाई ! मंसिर २२ गते विवाह गर्दै श्वेता खड्का, को हुन् दुलाहा ?
Nextरोकिएको कोरिया जाने प्रक्रिया तत्काल शुरु हुँदै…हेर्नुहोस् ।